Puntland oo wajaheysa dhaqaalo xumo & Dekadda Boosaaso oo xiran - Awdinle Online
Puntland oo wajaheysa dhaqaalo xumo & Dekadda Boosaaso oo xiran
March 3,, 2020 (Awdinle Online) –Sida aan xogta ku helnay, ayaa sheegaysa in mudo 10 Maalin ah xiran Dekadda Magaalada Boosaaso ee Maamulka Puntland kadib markii ganacsatada ay ka godoodeen Canshuur cusub oo lagu soo rogay.
Sidoo kale waxaa xiran Suuqa weyn ee Magaalada Boosaaso iyadoo albaabada la isugu dhuftay bakhaaradii iyo dukaamadii yaryaraa kadib markii ay sheegeen ganacstada inaysan awoodin canshuurta cusub ee lagu soo rogay.
Maalintii Khamiista aheyd ayaa waxaa Magaalada Boosaaso ka dhacay banaanbax weyn oo arrintaan looga soo horjeedo, waxaana sidoo kale socdo qaban qaabada banaanbaxyo kale oo la filayo inay ka dhacaan Magaaladaas.
Qaar ka tirsan ganacstada joojiyey inay wax kala soo dagaan Dekadda Boosaaso oo la hadlay Awdinle Online ayaa sheegay in lagu soo rogay Canshuur cusub oo ay ku sheegeen ujeedada laga leeyahay inay tahay sidii loogu adeegsan lahaa siyaasadaha kasoo cusboonaaday Soomaaliya gaar ahaan in lagu taageero Maamulka Jubbaland.
Waxaa fashil kusoo dhammaaday dhawr kulan oo ay yeesheen Maamulka Puntland iyo Ganacsatada gadoodsan, waxayna kulamadaas kusoo dhammaadeen fashil iyo isfaham darro.
Puntland ayaa sheegay in ay wajaheyso dhaqaale xumo, waxaana illaa hadda la bixin muddo 4 bil ah mushaarka ciidamada kala duwan xilli ay Puntland ku jirto xaalad dagaal oo kala dhaxeyso Somaliland iyadoo laga qabsaday Deegaanada Sanaag iyo Boorame.
Previous articleUN-OCHA: Oo so bandhigtay tirada dadkii ka barakacay dagaaladda Soomaaliya. Bishii Janaayo ee sanadkan
Next articleMadaxweyne Deni oo dhegax dhigay dhismo lagu kordhiyey Bangiga Dhexe ee Puntland.